Mitoetra ao aminao ny Fanahy Masina! - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02 > Ny Fanahy Masina dia mitoetra ao anatinao!
Tsapanao ve indraindray fa tsy ampy eo amin’ny fiainanao Andriamanitra? Afaka manova izany ho anao ny Fanahy Masina. Ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao dia nanizingizina fa ny Kristianina tamin'izany andro izany dia miaina ny fanatrehan'Andriamanitra velona. Fa eto ho antsika ve izy ankehitriny? Raha eny, manao ahoana izy? Ny valiny dia hoe Andriamanitra velona ao anatintsika ankehitriny, tahaka ny tamin’ny andron’ny apostoly, tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Heverintsika ho toy ny rivotra izany, ka noho izany dia tsy afaka mahita azy isika: “Ny rivotra mitsoka amin’izay tiany, ary renao ny fikotrokotrony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany. nateraky ny Fanahy” (Jaona 3,8).
Hoy ny manam-pahaizana kristiana iray: "Ny Fanahy Masina dia tsy mamela toerana ao amin'ny fasika". Koa satria tsy hita maso ny saintsika, dia mora jerena sy mora tsy takatra. Etsy ankilany kosa, miorina amin'ny tany mafonja ny fahalalantsika an'i Jesoa Kristy satria olombelona ny Mpamonjintsika. Ilay Andriamanitra izay nonina teo amintsika tamin'ny nofon'ny olombelona, ​​dia Jesosy Kristy, dia nanome endrika an'Andriamanitra ho antsika. Ary Andriamanitra Zanaka nanome an’Andriamanitra endrika ny Ray koa. Jesosy dia nanantitrantitra fa ireo nahita azy dia "nahita" ny Ray ihany koa. Samy iarahan'ny ray sy ny zanany miaraka amin'ny kristiana feno fanahy ankehitriny. Izy ireo dia eo amin'ny Kristiana amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Noho izany antony izany, dia te-hianatra bebe kokoa momba ny fanahy isika ary hiaina amin'ny fomba manokana. Amin'ny alalàn'ny Fanahy, ny mpino dia mahatsapa ny fanakaikezan'Andriamanitra ary omena alalana hampiasa ny fitiavany.
Ho an’ny apostoly, indrindra fa i Jaona, dia ny Fanahy Masina no mpanolo-tsaina na mpampionona. Izy dia olona antsoina hanampy amin'ny fahasahiranana na mila fanampiana. “Ary toy izany koa, ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika; fa tsy fantatsika izay tokony hivavahana, fa ny fanahy no misalovana ho antsika amin’ny fisentoana tsy azo tononina” (Romana). 8,26).
Ireo tarihin'ny Fanahy Masina dia vahoakan'Andriamanitra, hoy i Paoly. Ambonin'izany, zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra izy ireo izay miresaka azy ho rainy. Feno ny Fanahy, afaka miaina amin'ny fahafahana ara-panahy ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy mifamatotra amin'ny natiora ota intsony ianao ary miaina fiainana miaina fitaomam-panahy sy firaisana amin'Andriamanitra. Izany no fiovana mahery vaika izay ataon'ny Fanahy Masina mamadika olona.
Ny fanirianao dia halefa any amin'Andriamanitra fa tsy amin'izao tontolo izao. Niresaka momba izany fiovana izany i Paoly: “Fa raha vao niseho ny hatsaram-po sy ny fitiavan’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, dia namonjy antsika Izy - tsy noho ny asa izay ho nataontsika tamin’ny fahamarinana, fa araka ny famindram-pony - tamin’ny fandroana. ny fahaterahana indray sy ny fanavaozana ao amin’ny Fanahy Masina” (Titosy 3,4- iray).
Ny fisian’ny Fanahy Masina no tena zava-misy mamaritra ny fiovam-po. Noho izany, dia afaka nilaza toy izao i Paoly: “Fa izay tsy manana ny Fanahin’i Kristy dia tsy azy.” (Rom 8,9). Rehefa tena niova fo ny olona iray dia hitoetra ao aminy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina i Kristy. An’Andriamanitra ny olona toy izany, satria ny fanahiny no nanao azy ho fianakaviany.
Ahoana no ahafahantsika manana hery sy fanatrehan'ny Fanahy Masina ao amin'ny fiainantsika ary mahafantatra fa ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika? Ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao, indrindra fa i Paul, dia nilaza fa ny vokatry ny valin'ny olona iray amin'ny fiantsoan'Andriamanitra dia ny hery. Ny antso hanaiky ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia mamela antsika hanana fomba fisainana taloha ary hiaina miaraka amin'ny Fanahy.
Noho izany dia mila entanina isika mba hotarihin’ny Fanahy, handeha araka ny Fanahy, hiaina ao amin’ny Fanahy. Ny fomba hanaovana izany dia voafaritra amin'ny fitsipika midadasika ao amin'ny bokin'ny Testamenta Vaovao. Nohamafisin’ny apostoly Paoly fa ny Kristianina dia tokony “hamosika” ny fanahy izay hanampy azy hiaina ireo toetra tsara anisan’izany ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny fahari-po, ny hatsaram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ​​ny fahatokiana, ny fahalemem-panahy, ary ny fifehezan-tena (Galatianina). 5,22- iray).
Hita amin'ny toe-java-misy ao amin'ny Testamenta Vaovao, ireo toetra ireo dia mihoatra noho ny hevitra na hevitra tsara. Izy ireo dia taratry ny hery ara-panahy marina ao anaty ny mpino nomen'ny Fanahy Masina. Io hery io dia miandry ampiasaina amin'ny toe-javatra rehetra amin'ny fiainana.
Rehefa ampiharina, ny hatsarana dia lasa "voa" na porofo fa ny Fanahy Masina miasa ao amintsika. Ny fomba hahazoana hery omen'ny Fanahy dia ny fangatahana amin'Andriamanitra ny fahatongavan'ny Fanahy tsara ary avy eo tarihiny.
Koa satria mitarika ny vahoakan'Andriamanitra ny Fanahy, dia manamafy ny ain'ny Fiangonana sy ny andrim-panjakana koa ny Fanahy. Io no fomba tokana hanamafisana ny Fiangonana ho rafitry ny orinasa - ireo mpino tsirairay izay miaina araka ny Fanahy.
Fitiavana ao amin'ny kristiana
Ny porofo na toetra ambony indrindra amin'ny asan'ny Fanahy Masina ao anatin'ny mpino dia ny fitiavana. Ity fananana ity dia mamaritra ny toetran'Andriamanitra sy hoe iza Andriamanitra. Ny fitiavana dia manondro mpino ara-panahy. Ny apostoly Paoly sy ny mpampianatra hafa ao amin'ny Testamenta Vaovao no tena niahy an'io fitiavana io. Te hahafantatra raha toa ka nitombo sy nanova ny fiainana Kristiana tsirairay ny fitiavan'ny Fanahy Masina.
Ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy, ny fanompoam-pivavahana, ary ny fampianarana nentanim-panahy dia (ary manan-danja) ho an’ny Fiangonana. Ho an’i Paoly anefa, ny fiasan’ny fitiavana ny Fanahy Masina ao anatin’ny mpino an’i Kristy dia zava-dehibe kokoa. Afaka niteny “tamin’ny fitenin’ny olona sy ny anjely” i Paoly (1. Korintiana 13,1) fa raha tsy ampy fitiavana izy dia tsy inona fa mpitabataba. Afaka “manana ny fanomezam-pahasoavan’ny faminaniana” koa i Paoly, afaka “mahatakatra ny zava-miafina rehetra sy ny fahalalana rehetra” ary na dia “manana finoana mahafindra tendrombohitra aza” (and. 2). Fa raha tsy ampy fitiavana izy dia tsinontsinona. Na dia trano fitehirizam-pahalalana ara-baiboly na finoana mafy orina aza dia tsy mahasolo ny fanomezana hery ny fitiavana ny fanahy. Mety hiteny mihitsy aza i Paoly hoe: “Na dia omeko ho an’ny mahantra aza ny fananako rehetra, ka atolotro ho amin’ny afo tsy misy fitiavana ny tenako, dia tsy mahasoa ahy izany” (and. 3). Tsy tokony afangaro amin’ny asan’ny Fanahy Masina amin’ny fitiavana ny fanaovana ny asa tsara ataon’ny tena ho an’ny tena.
Ny krôma ho an'ny mpino dia ny fisian'ny Fanahy Masina mavitrika sy ny valin'ny Fanahy. Nanantitrantitra i Paoly fa ny tena olon'Andriamanitra - ny tena Kristiana - dia ireo izay nohavaozina, nateraka indray ary niova ho fitaratra taratry ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Misy fomba tokana ahafahana manova izany fiovanao izany. Amin'ny alàlan'ny fiainana izay tarihin'ny Fanahy Masina izay manana ny maha izy azy izany. Andriamanitra Fanahy Masina dia fisehoan'Andriamanitra ao am-ponao sy ao an-tsainao.